Sheegiddii David Wilkerson ee Corona Faafidda 1986 | Apg29
Waxaan arkay belaayo ku soo socota adduunka. iyo baararka, Kaniisadaha iyo dowladaha ayaa la xiray.
Daacuunka wuxuu ku dhici doonaa Magaalada New York, wuuna gariiri doonaa magaalada oo aysan horay u ruxin.
Wax sii sheegidda by David Wilkerson 1986
Waxaan arkay belaayo ku soo socota adduunka. iyo baararka, Kaniisadaha iyo dowladaha ayaa la xiray. Daacuunka wuxuu ku dhici doonaa Magaalada New York, wuuna gariiri doonaa magaalada oo aysan horay u ruxin.
Cadaabku wuxuu u rogi doonaa rumaystayaasha "kuwa aan salaadda ahayn" salaadda xagjirka ah iyo akhristayaasha Kitaabka Quduuska ah, iyo "tawbadkeenista" waxay noqon doontaa qaylada ilaaha oohinta jooga.
Tan waxaa ka soo baxay "baraarug saddexaad" oo ku qulqulaya America iyo adduunka oo dhan.
Ku saabsan David Wilkerson David Wilkerson, wuxuu ku dhashay May 19, 1931 magaalada Hammond, Indiana, wuxuu ku dhintey Abriil 27, 2011 meel u dhow Cuney oo ku taal Cherokee County, Texas, wuxuu ahaa wacdiye Mareykan ah.
Waxaa ku dhaqaaqay culeys xoog leh iyo rabitaan fudud oo gudaha ah, kaas oo uu ka helay xilligi salaadda keli ah ee gurigiisa, wuxuu yimid 1958 isagoo wadaad u ah New York si uu ula shaqeeyo dambiile, dhalinyaro nugul.
Tani waxay horseeday aasaaska hay'ad caalami ah iyo dhaqancelinta daweynta daroogada ee Teen Challenge.
Ka sokow waxa ka socda Isutagga Cross iyo Stilettos, wuxuu caan ku yahay farriimaha nebiyadiisa ee xoogga leh iyo inuu yahay hogaamiyaha kaniisadda Times Square ee Manhattan.
Wilkerson wuxuu ku dhintay shil baabuur.
Qoraalkan ayaa yimid kadib talo bixin.